Home Wararka Sharciga Bangiga Dhexe oo Si khiyaano ah loo Badalay!!!!
Sharciga Bangiga Dhexe oo Si khiyaano ah loo Badalay!!!!
Hndisaha badalka xeerka Maamulka iyo xulista madaxda Bangiga ayaa waxa loo gudbiyey Golaha Shacbiga, inkastoo dadka qaar ayq abaan inuusan golahan ka wakiil ahayn shacbiga ee uu dowladdaba u shaqeeyo una saxeexo waxkasta oo ay rabto. Waana soo ansixiyeen iyagoon xataa aan si fiican uga doodin. Ogaada waa khiyaano ay Barlamanka iyo dowladda ku wada jiraan.
Xeerkan waxaa si khiyaano ah loogu qoray in QOFKASTA oo ugu dhibca sareeya loo qadan karo inuu Bangigii Ummada Somaliyeed uu guddoomiye ka noqdo. Ogaada xeerka wuxuu lahaa Qof aan Muwadin Somali ahayn ma qaban karo xilka guddoomiyaha. Hadda waa qofkasta oo Lacagtaada waxaa ku saxeexnaan doono nin aan Somali ahayn.Bangiga sidii loo dhisay waligiis qof ajnabi ah guddoomiye kama soo noqon.
Haddaba bal eega heerka khiyaanada dowladdaan in xataa golaha shacbiga gaartay waxaana xigi doona in mardhow calooshood u shaqeystayaal aan arxan lahayn loo dhiibo NISA, iyo Boliiska si adiga laguu dilo waayo qofkaas ma jiro sharci qabanaya oo intuu wax xado ayuu dalkiisa tagayaa waxaa kaliya ee laga dhigi karo waa PNG sida Haysom oo kale laakiin far laguma fiiqi karo.
Tolw ma Waxaa hadda jidka ku soo jira Sarkaal Eriteriyaan oo la rabo in NISA loo dhiibo si ay maalin cad ragga xiniinyaha uga bixiso, hablahana Naasaha koronto looga qabto?
[pdf-embedder url=”http://46.101.175.207/wp-content/uploads/2019/01/Xeer-maamul-xulida-gudiga-agaasinka-bankgiga-dhexe1.pdf” title=”Xeer maamul xulida gudiga agaasinka bankgiga dhexe(1)”]